စမိုင်းလ် ပိန်သွားတာကို အရမ်းချီးကျူးတယ်ဆိုတဲ့ ကြည်လဲ့လဲ့ဦး – Lucky9
စမိုင်းလ် ပိန်သွားတာကို အရမ်းချီးကျူးတယ်ဆိုတဲ့ ကြည်လဲ့လဲ့ဦး
နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ by Lucky9
တစ်ခေတ်တစ်ခါက VCD လောကမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ မင်းသမီးကတော့ ကြည်လဲ့လဲ့ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီး နောက်ပိုင်း အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ ကင်းကွာသွားခဲ့တဲ့ ကြည်လဲ့လဲ့ဦးက ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုသာ ဇောက်ချ လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ခင်ပွန်းသည် သရုပ်ဆောင် ဇာနည် ၊ သားသမီး ၃ ယောက်နဲ့အတူ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို တည်ဆောက်လာတာဆိုရင် အိမ်ထောင်သက် ၁၄ နှစ်ကျော် ကြာခဲ့ပါပြီ။
သားသမီးရေး စီးပွားရေးတွေနဲ့ နပန်းလုံးနေရတဲ့ ကြည်လဲ့လဲ့ဦးက ပင်ပန်းလွန်းတာကြောင့် ဝိတ်မကျနိုင် ဖြစ်နေပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် စမိုင်းလ်ကို အားကျတယ်ဆိုတဲ့ ကြည်လဲ့လဲ့ဦးရော အနုပညာအလုပ်တွေ ပြန်လုပ်ဖို့ ဝိတ်ချဦးမလားဆိုတာကိုတော့ အင်တာဗျူးမှာ ခုလို ဖြေကြားသွားပါတယ်။
“အနုပညာအလုပ်က အမစိတ်ဝင်စားရင်တော့ လုပ်ပါသေးတယ်။ တော်တော်တော့ ကင်းကွာသွားတာ ကြာပြီ။ ဒါပေမဲ့ အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေတော့ ဆက်နွယ်နေတာလေးတွေ လုပ်ဖြစ်သေးတယ်။ လုပ်ဖို့ရှိတဲ့ဟာလည်း ရှိတယ်။ လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်။ အမနဲ့ အမအမျိုးသား ဦးဆောင်ပြီး နောက်ပိုင်း ပရိသတ်တွေကို ချပြသွားမှာပါ။” လို့ ဆိုပါတယ်။
“အမ ပုံစံနဲ့ အမ ယောက်ျားနဲ့တော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ခပ်စိပ်စိပ်လုပ်ဖို့ မလွယ်တော့ဘူးလေနော်။ ဝိတ်ကလည်း ချဖို့က မချနိုင်ဘူး။ စမိုင်းလ်ကို အရမ်းချီးကျူးတယ်။ ကိုယ်က စိတ်ပဲရှိတာကွာ ။ စမိုင်းလ်ဆိုရင် ပိန်သွားတာ အရမ်းချီးကျူးတယ်။ ငါလည်း ပိန်အောင်လုပ်မယ် လုပ်မယ်ဆိုပြီး ဒီတိုင်းပဲ။ စိတ်ပင်ပန်းတော့ ပိုဝတာလား မသိဘူး။ ကလေးတွေကလည်း ငယ်သေးတော့။ မနက်မိုးလင်းကနေ မိုးချုပ် ကလေးတွေ အတွက်ရော စီးပွားရေးရော။ တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ အနုပညာဆိုတာထက် ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအတွက် ဝိတ်ချရမှာပါ။” ဆိုပြီး ပြောပြသွားပါတယ်။
ဝလည်း ချစ်နေဆဲပါပဲ ဆိုတဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ နယ်ပရိသတ်တွေကို ကျေးဇူးတင်သလို တစ်ခုခုပြန်ပြီး ပေးဆပ်သွားချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကြည်လဲ့လဲ့ဦးက ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါတယ်။
Source : nanmalgyi
တဈခတျေတဈခါက VCD လောကမှာ အောငျမွငျကြျောကွားခဲ့တဲ့ မငျးသမီးကတော့ ကွညျလဲ့လဲ့ဦး ဖွဈပါတယျ။ အိမျထောငျကပြွီး နောကျပိုငျး အနုပညာအလုပျတှနေဲ့ ကငျးကှာသှားခဲ့တဲ့ ကွညျလဲ့လဲ့ဦးက ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးကိုသာ ဇောကျခြ လုပျကိုငျနပေါတယျ။ ခငျပှနျးသညျ သရုပျဆောငျ ဇာနညျ ၊ သားသမီး ၃ ယောကျနဲ့အတူ သာယာပြျောရှငျတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို တညျဆောကျလာတာဆိုရငျ အိမျထောငျသကျ ၁၄ နှဈကြျော ကွာခဲ့ပါပွီ။
သားသမီးရေး စီးပှားရေးတှနေဲ့ နပနျးလုံးနရေတဲ့ ကွညျလဲ့လဲ့ဦးက ပငျပနျးလှနျးတာကွောငျ့ ဝိတျမကနြိုငျ ဖွဈနပေါတယျ။ သရုပျဆောငျ စမိုငျးလျကို အားကတြယျဆိုတဲ့ ကွညျလဲ့လဲ့ဦးရော အနုပညာအလုပျတှေ ပွနျလုပျဖို့ ဝိတျခြဦးမလားဆိုတာကိုတော့ အငျတာဗြူးမှာ ခုလို ဖွကွေားသှားပါတယျ။
“အနုပညာအလုပျက အမစိတျဝငျစားရငျတော့ လုပျပါသေးတယျ။ တျောတျောတော့ ကငျးကှာသှားတာ ကွာပွီ။ ဒါပမေဲ့ အနုပညာနဲ့ ပတျသကျတဲ့ လုပျငနျးတှတေော့ ဆကျနှယျနတောလေးတှေ လုပျဖွဈသေးတယျ။ လုပျဖို့ရှိတဲ့ဟာလညျး ရှိတယျ။ လုပျနတေယျပေါ့နျော။ အမနဲ့ အမအမြိုးသား ဦးဆောငျပွီး နောကျပိုငျး ပရိသတျတှကေို ခပြွသှားမှာပါ။” လို့ ဆိုပါတယျ။
“အမ ပုံစံနဲ့ အမ ယောကျြားနဲ့တော့ အနုပညာအလုပျတှကေို ခပျစိပျစိပျလုပျဖို့ မလှယျတော့ဘူးလနေျော။ ဝိတျကလညျး ခဖြို့က မခနြိုငျဘူး။ စမိုငျးလျကို အရမျးခြီးကြူးတယျ။ ကိုယျက စိတျပဲရှိတာကှာ ။ စမိုငျးလျဆိုရငျ ပိနျသှားတာ အရမျးခြီးကြူးတယျ။ ငါလညျး ပိနျအောငျလုပျမယျ လုပျမယျဆိုပွီး ဒီတိုငျးပဲ။ စိတျပငျပနျးတော့ ပိုဝတာလား မသိဘူး။ ကလေးတှကေလညျး ငယျသေးတော့။ မနကျမိုးလငျးကနေ မိုးခြုပျ ကလေးတှေ အတှကျရော စီးပှားရေးရော။ တဈခြိနျခြိနျမှာတော့ အနုပညာဆိုတာထကျ ကိုယျ့ကနျြးမာရေးအတှကျ ဝိတျခရြမှာပါ။” ဆိုပွီး ပွောပွသှားပါတယျ။
ဝလညျး ခဈြနဆေဲပါပဲ ဆိုတဲ့ ပရိသတျတှနေဲ့ နယျပရိသတျတှကေို ကြေးဇူးတငျသလို တဈခုခုပွနျပွီး ပေးဆပျသှားခငျြပါတယျဆိုတဲ့ အကွောငျး ကွညျလဲ့လဲ့ဦးက ကြေးဇူးတငျစကား ပွောကွားသှားပါတယျ။
အကယ်ဒမီ ဆန်ခါတင် (၂၅)ကားထဲမှာ ဇာတ်ကားအများဆုံး ပါဝင်ထားတဲ့ ဖွေးဖွေး
သဘင်အနုပညာလောကကိုစော်ကားသူဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ လူရွှင်တော် ဦးတိုင်းကျော်
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ယွန်းတို့ညီအစ်မနှစ်ယောက်ရဲ့ ငယ်ဘဝပုံလေးတွေကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ မေသူ
တူလေးမြတ်သောမောင်ကို အမေရိကားခရီးစဉ်လိုက်ပို့ပေးနေတဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ
ဖွေးဖွေးကန်တော့တာ လက်မခံတဲ့ မို့မို့မြင့်အောင်
“အစ်မဖြစ်သူ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကို အပျိုကြီးပဲလုပ်စေချင်တယ်” ဆိုတဲ့ နဒီရွှေရည်
အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်နေတဲ့ မြင့်မြတ်
အောင်သူရဲ့ အချစ်ရေးအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ လက်ရွေးစင်ဟောင်း ကျော်မင်းဦး
အရက်သောက်ခြင်းက နိုင်ငံခြားဘာသာစကား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာပြောနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုဟုဆို
မိခင်တစ်ဦးပြောပြခဲ့တဲ့ လူတိုင်းလုပ်နိုင်မယ့် အလွယ်ကူဆုံးပိုက်ဆံစုနည်း
အဆို​တော်​ Rဇာနည်​ မိသားစုက နာ​ရေးကူညီ မှုအသင်း(ရန်​ကုန်​)ကိုကား(၄)စီးလှူဒါန်း
မိခင်ဖြစ်သူရဲ့လေးစားစရာကောင်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကို ပြောပြခဲ့တဲ့ ပြေတီဦး
We believe that Myanmar’s future is best served by having an informed and involved citizenry that has access toawide range of sources of news and views and an open and vibrant environment in which to share and to debate ideas and opinions. The Lucky9 was set up to help create such an environment, and that is what we continue to work towards.
Categories Select Category Health Knowledge News Uncategorized ချစ်မှုရေးရာ ထီပေါက်စဉ် နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ မိုးလေ၀သ ရုပ်သံ အနုပညာရပ်ဝန်း ဗေဒင် ကြားသိရသမျှ
Lucky9 Copyright © 2019.